Pet Chikafu Mudziyo Vagadziri - China PET Chikafu Mudziyo Fekitori & Vatengesi
MuCOPAK, Disposable epurasitiki chikafu mugaba, Inotsvaga yemidziyo yepurasitiki inochengetera uye inoratidza masaladi uye zvimwe zvinotonhora zvekudya. Kunyangwe iwe uri kuitisa pati kana kuita bhizinesi rekushandira chikafu, izvi midziyo zvakakwana pakushandira madhishi. Bvisa mapurasitiki evha zvidhindo kuti uderedze njodzi yekubuda.
Disposable epurasitiki chikafu mugaba inogona kunge ine rectangular uye mativi chimiro kana yakatenderera midziyo yepurasitiki pamwe nemidziyo mizhinji yemakamuri.Iwe unogona kusarudza Yakajeka dhizaini midziyo kana chikafu chekudya chine chinamirwa mhando.
PET Dhiraini midziyo
PET Dhirivhari Midziyo ine Lids dzakachengetedzwa dzakachengetedzwa dzinoitwa kubva kune yakajeka yakajeka PET zvinhu kuti zvipe kuoneka kwakasarudzika uye kudzivirirwa kune ako anotonhora zvigadzirwa zvigadzirwa. Yakakwana kune saradhi, michero, miriwo, dhiri chikafu uye yogati. Iwo zvakare ari 100% anoshandiswazve mune yako curbside marara.
Izvi PET dhizaini midziyo uye zvivharo zvakakurumbira kutora sarudzo dzechikafu chinotonhora, sandwiches, michero uye masaradhi. Izvo zvakagadzirirwa kuve inokwezva yekuchengetera sarudzo kune ako edibles uye inowanikwa mune akasiyana saizi uye nekudzika.